Goorma iyo maxay tahay inaad u sheegto cidda aad u shaqayso dhibaatadaada caafimaad?
Goorma ayaan u sheegaa cidda aan u shaqeeyo dhibaatadayda caafimaad?
Lors d’un arrêt maladie : Si aad ugu diyaargarowdo ku laabashadaada shaqada, dhakhtarka shaqadu wuxuu noqon karaa hanti qiimo leh. Goorma soo kabashada ka hor, waxaad awoodi doontaa inaad la barato isaga xaaladaha soo kabashada ama
Goorma iyo maxay tahay inaad u sheegto cidda aad u shaqayso dhibaatadaada caafimaad? 17-Abriil, 2022Tranquillus
READ Waxyaabaha muhiimka u ah Zoom
horeQormada la kormeero
socdaWaa maxay dib-u-soocidda iyo goorma ayaa la i saameeyaa?
Adeegso waxqabad qayb ahaan muddada dheer ah oo ku saleysan heshiiskooda wadajirka ah